5 Tanànan'ny antoko tsara indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Tanànan'ny antoko tsara indrindra any Eropa
(Last Nohavaozina: 24/10/2020)
Tranon'i Eropa ary mahafatifaty arabe ary toerana no toerana natao ho an'ny talenta mahavariana nandritra ny an'arivony taona. Mandra-pahatongan'ity anio ity i Eropa dia toeran'ny antoko quintessential eo amin'izao tontolo izao. Izy no Mekamin'ny antoko ho an'ny mpandehandeha manerantany fitsangatsanganana bachelor sy bachelorette. Noho izany, nifidy tsara ny tsara indrindra izahay 5 tanànan'ny antoko any Eropa amin'ny fialan-tsasatra mahafinaritra sy mahafinaritra.
Berlin ho any Amsterdam, mandrava trano fisakafoanana lehibe indrindra any Eoropa, ny fiaran-dalamby Tsidika na fihinanana club, fehikibo ny fehikibo fipetrahanao ho an'ny dia farany indrindra.
Ny lalamby fiaran-dalamby no làlana indrindra amin'ny fomba fitsangatsanganana indrindra any Eoropa. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, The Tranonkala tapakila mora vidy indrindra eto amin'izao tontolo izao.
1. Fety any Berlin, Alemaina
Iray amin'ireo tanàna be mpitia indrindra any Eoropa, Berlin no Meky ho an'ny mpanakanto, mozika, ary ny DJ tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Ny tantarany sy ny kolontsain'izy ireo dia nisy fiantraikany teo amin'ny fahasamihafana sy ny fomba malalaka misokatra, izay midika fa misy zavatra rehetra lasa. Ary noho izany, Berlin no tanàna miandalana indrindra sy mahomby indrindra ao Eropa.
Ny alàlan'ny klioba sy fety any Berlin dia matetika manomboka amin'ny alàlan'ny maizina. Raha te-hiaina ny fiainana any Berlin tahaka ny any Berliner ianao, manaova kiraro mampahazo aina, manao akanjo fitafy ary tonga amin'ny zoma izao. Mitadiava sotro amin'ny iray amin'ireo bara marobe any Berlin ary mitodi-doha ho any amin'ny faritra indostrialy.
Ny klioba tsara indrindra any Berlin dia miafina any amin'ny faritry ny indostrian'i Berlin ary eo ambanin'ny dian'ny lamasinina. Miomàna tsara ho an'ny fety tsy mijanona, na mijanona raha tsy mijanona ilay lehilahy farany. Amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena ao Berliners dia manomboka vao manomboka 1 amin'ny sabotsy ka hatramin'ny alahady alina. Io dia tena mametraka an'i Berlin amin'ny tanànan'ny antoko faran'izay henjana indrindra sy tsara indrindra any Eropa miaraka amin'ireo mpizahatany sy mpizahatany mandeha eran'izao tontolo izao.
Inona No Ataon'ny sakaiza tsara indrindra any Berlin??
Raha milahatra amin'ny fety 48h ianao ary manana fotoana iray ho an'ny klioba tokana, dia ataovy antoka fa hanao fety ao Berghain ianao. Ny feon'ny teknolojia sy trano tsara indrindra dia handrovitra ny gorodona mandihizana mandritra ny faran'ny herinandro.
2. Fety ao Budapest, Hongria
Mandritra ny andro sy ny masoandro mody, Budapest dia olona mahery setra miaraka amin'ireo vatosoa sy tranokala mahafinaritra. Rehefa mandehandeha eny an-dalambe ianao, zara raha hitan'ny masonao zahana taorian'ny marika tsara tarehy indrindra any Eropa. fa, amin'ny alina dia hahita tontolo hafa ianao, ny tontolon'ny trano tsy mendrika dia mitodika any amin'ny bara tsy fahita any Europe, ary ity sehatra tsy manam-paharoa ity dia mametraka an'i Budapest antsika 5 tanànan'ny antoko tsara indrindra any Eropa.
Aorian'ny maizina, amin'ny toerana hafa, izay tsy misy fitsipi-pifehezana na fitsipika momba ny trano, tsy maintsy mandeha ny biby.
Inona ny fihafiana amin'ny alina tsara indrindra Budapest?
Ny zaridaina tsotra dia bara fahagagana an'i Budapest ao amin'ny distrika 7 ary ny fizarana ambony any labyrinthine sy ny fitsidihana tsy maintsy fitsidihana ho an'ny traikefa nahafinaritra indrindra tamin'ny alin'ny antoko Budapest.
Vienna to Budapest amin'ny lamasinina
Prague to Budapest amin'ny lamasinina
Munich mankany Budapest amin'ny lamasinina
Graz mankany Budapest amin'ny lamasinina
3. Fety any Prague, Repoblika Tcheky
Ny Prague dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa. Mandritra ny andro dia hahatsapa ho tahaka ny niverenanao fotoana ho any amin'ny fitambarana maro ianao, andriana, ary tantara tantara, fa amin'ny alina dia mandeha amin'ny alina ianao, izay ny fametrahana no tavela ao ambadiky ny varavarana.
Feno zaridaina amoron-drano amoron-drano ny tanàna, Pubs, ary hidy misy fomba fijery mahavariana momba ny tanàna ary mazava ho azy ny toerana malaza amin'ny klioba.
Inona ny fihafiana amin'ny alina tsara indrindra Prague?
Ny Prague dia fonenana lehibe amin'ny klioba lehibe indrindra any Eoropa, ilay 5-tantara Karlovy Lazne Club. Noho izany, raha mikasa ny handehanana any Prague ianao miaraka amin'ny namanao na ny Eurotrip hitrandraka ireo tanànan'ny antoko faran'izay tsara indrindra ao Eropa, dia ity no fiatoana amin'ny dianao. Aza adino fa rehefa miditra amin'ny lapan'ny klioba ianao, mety hivoaka ny olona iray hafa tanteraka ianao na inona na inona mitranga any Prague, dia mijanona ao Prague.
Nuremberg mankany Prague amin'ny lamasinina
Munich mankany Prague amin'ny lamasinina
Berlin mankany Prague amin'ny lamasinina
Vienna mankany Prague amin'ny lamasinina
4. Fety any Amsterdam, The Netherlands
Malaza amin'ny lakandrano mahafinaritra ary fivarotana kafe, Evelopeana malaza any Amsterdam toerana fialan-tsasatra. Manana vibe milamina io, na eo aza ny fivarotana mena sy ny fivarotana kafe.
Raha ny an'ny Holandey aleony ny fanangonana fanalahidy ambany, raha manontany mpizahatany avy any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ianao, hoy izy ireo fa manana lafiny hafa i Amsterdam. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, in Amsterdam, hahita feo re ao amin'ny ankamaroan'ny klioba ianao, fa koa velona mozika. Ny fampisehoana mivantana dia be mpitia ao Amsterdam.
Inona ny fihafiana amin'ny alina tsara indrindra Amsterdam?
Ny sasany amin'ireo klioba mozika mivantana tsara indrindra dia Melkweg sy Bimhuis, ary ny kapa amin'ny alina tsara indrindra dia De Marktkantine sy Shelter.
5. Fety any Vienna, Aotrisy
Ny tanàna izay fantatsika rehetra noho ny tantara an-tsehatra nataony sy ny fiainana ara-kolontsaina dia manana fiaina mahafinaritra sy mahafinaritra ihany koa. Mifanohitra amin'ny seho amin'ny takariva amin'ny alina hafa any amin'ny firenena manodidina, Ny toerana fisakafoanana alina any Vienna dia tsara kokoa ary milamina kokoa. Ohatra, ambany ny saram-pidirana miditra ao Vienna miaraka amin'ireo politikam-baravarana milamina.
In Vienne, mety hahita klioba techno ianao ny ankamaroany, fa koa gorodona ambanin'ny tany sy asidra ao amin'ny klioba sasany.
Inona ny fihafiana amin'ny alina tsara indrindra Vienna?
Ho an'ny antoko techno tsara indrindra dia mandehana any amin'i Das Werk sy Grelle Forelle. Raha mila club ianao, dia milomano mankany amin'ny Gurtel, lalana izay mandeha amin'ny afovoan-tanàna. Ao izany no hahitanao ny ankamaroan'ny pub sy ny klioba mitambatra. Aza adino ny manamarina an'i Venster99.
Elektro Gonner dia ohatra tsara amin'ny tantaram-piainan'i Vienna matanjaka. Ao amin'ny fivarotana elektrika, sehatra iray ho an'ny fametrahana lahatsary sy mozika elektronika ihany koa. Le Loft bar dia mipetraka eo an-tampon'ny Sofitel Vienna Stephansdom miaraka amin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny fijerin'ny tanàna.
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny fety any Eropa
Inona no fotoam-pifaliana tsara indrindra iainana any Eoropa??
Ny lohataona sy ny fiandohan'ny fiandohan'ny taona no vanim-potoana tsara indrindra hivezivezena sy hahita ireo tanàna fety tsara indrindra any Eoropa.
Inona no laharam-pahamendrehana amin'ny vidim-pidirana amin'ny fidirana amin'ny alina any Eropa?
Ny saram-pidirana dia miovaova isaky ny firenena. Ny ankamaroan'ny tanàna eropeana dia tena lafo vidy, ohatra, Prague sy Budapest, 5-20 fidirana euros sy alikaola amin'ny vidiny mirary, ny toerana sasany dia lafo kokoa, fa ny zava-dehibe indrindra, tonga aloha maraina, ka tsy voatery hijoro ela ao amin'ny filaharana ianao.
Izay tanàna ananan'ny alina tsara indrindra any Eoropa amin'ny taom-baovao sy krismasy?
Ny tanàna tsara indrindra ho an'ny fetin'ny Noely sy ny Taom-baovao dia tena i Berlin raha mandeha amin'ny a mafy teti-bola. Tsara tarehy ny Amsterdam sy Prague amin'ny ririnina, fa somary miavaka ihany.
Hamaranana, I Eropa dia manana zavatra atolotra ho an'ny tsirony rehetra, faniriana, faharatsiana, ary ny teti-bola. Ny tamponay 5 Ny tanàna fety dia manolotra ny tsara indrindra amin'ny tontolo rehetra. Azonao atao ny manomboka manomboka moramora amin'ny alàlan'ny fiatoana na hiran'ny mozika mozika mivantana ary hanohy hatrany amin'ireo gorodona dihy farany indrindra any Eropa, rehetra ao anaty iray alina. Mba hahatongavan'izany rehetra izany, ny tanàna rehetra dia mora azo amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby Tsangatsangana, ka raha ny nofinofisinao indrindra dia ny fety faran'ny herinandro adala ka hitsidika ny rehetra 5, dia miandry i Europe.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakila fiarandalamby mora indrindra amin'ireo tanàna mahafinaritra fety ato amin'ny lisitray.
Te hampiditra am-peo ny lahatsoratray hoe "Tanànan'ny antoko 5 tsara indrindra any Eoropa" ao amin'ny tranonkalanao ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / en mba / de na / en sy ny maro hafa fiteny.
AmsterdamParty berlinparty budapestparty europenightlife europepartycity Nightlife Party PragueParty TravelVienna viennaparty
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Ahoana no To ho Friends In Strange vaovao maneran-tany